तपाईंले खोप लगाउनुअघि - This Is Our Shot Canada
मलाई पहिले नै कोभिड-१९ रोग लागिसकेको छ भने मैले खोप लगाउनु पर्छ र?
हो, पहिले कोभिड-१९-ले ग्रस्त हुने व्यक्तिहरूले पनि खोपका दुवै खुराकहरू लगाउनु अनिवार्य छ। विशेषज्ञहरूलाई अहिले पनि यो ज्ञात भएको छैन कि कोभिड-१९ रोगबाट निको भएपछि पुनः बिमार हुनुबाट तपाईं कति समयसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ। खोपले एन्टिबडि (प्रतिरक्षी) उत्पन्न गरेर तपाईंलाई सुरक्षित राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ अनि तपाईंले कुनै बिमारीको अनुभव गर्नुहुने छैन।
यदि तपाईं हालसालै कोभिड-१९-ले ग्रस्त हुनुभएको थियो भने, खोप लगाउनभन्दा पहिले तपाईं यसबाट निको भइसकेको साथै तपाईंले सेल्फ-आइसोलेशन (आफू अलग्गै बस्नु)-को अवधिलाई पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ।
मैले खोप लगाएको छैन तर मेरो परिवारको सदस्य/साथीले लगाउनु भएको छ, के हामी सँगसँगै समय बिताउन सक्छौँ? मैले खोपको एक खुराक लगाएको छु भने, त्यस अवस्थामा के गर्नु पर्छ? मैले अझै पनि मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्ने जस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्यका आदेशहरू पालना गर्नु पर्ने छ र?
खोप लगाएका सबै जनाले अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यका मार्गदर्शन पालना गर्नु पर्छ। तपाईंले खोप लगाएपछि पनि, आफ्ना हात धुने, सुरक्षित भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने र बिरामी हुँदा घरमा बस्ने जस्ता रोकथामका उपायहरू निरन्तर अपनाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने छ। यसो गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने धेरै कारणहरू छन्:
तपाईंका शरीरले कोभिड-१९ खोपबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न न्यूनतम दुई हप्ता लाग्छ। यसको अर्थ, यदि तपाईं खोप लगाउनुअघि वा खोप लगाएको दुई हप्ताभित्र कोभिड-१९ को सम्पर्कमा आउनु भयो भने, तपाईं अझै पनि कोभिड-१९ बाट बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । त्यसैले यदि तपाईंले खोप लगाएपछि कोभिड-१९ का लक्षणहरू अनुभव गर्नु भयो भने परीक्षण गराउनुहोस्।
खोपले सबैजनालाई कोभिड-१९ हुनबाट रोक्ने छैन। खोप लगाएर भाइरस भएका व्यक्तिहरू गम्भीर बिमारी भएको अनुभव गर्ने अति कम सम्भावना हुन्छ।
उपलब्ध खोपहरू उच्च प्रभावकारी छन्, तर तपाईं यसको प्रतिरक्षा नभएका मानिसहरूको थोरै सङ्ख्याभित्र पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं निकट सामिप्यता भएका मानिसहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु हुन्छ वा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायहरू पालना गर्नु हुन्न भने, तपाईं अझै पनि कोभिड-१९ फैलाउन सक्नुहुन्छ।
के खोप लगाउनु अनिवार्य छ?
होइन, कोभिड-१९ खोप लगाउने काम पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक छ। कोभिड-१९ खोप लगाउने वा नलगाउने भन्ने तपाईंको रोजाइ हो।
को-को यसका लागि योग्य छन्?
अध्यागमनको स्थितिलाई ध्यान नदिइकन क्यानडाका सबै निवासीहरू कोभिड-१९ खोपहरूका लागि योग्य छन्। तपाईंसँग वैध PHN हुनु आवश्यक छैन। हाल 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू मात्र Moderna, AstraZeneca र Johnson & Johnson खोपहरू लगाउन योग्य हुनुहुन्छ। 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू Pfizer-BioNTech खोप लगाउन योग्य हुनुहुन्छ।